5 Goobaha Best Si Cun Cream Ice In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Goobaha Best Si Cun Cream Ice In Europe
Kuwii nasiib ku filan oo ay booqo Europe taqaan farax iyo dareen u quudhin inay bixisaa. Safraya Europe kobciyo kartaa noloshaada siyaabo badan. From luqadaha, indhaha fantastic, iyo taariikhda si aannu cunto u cajiib ah in aadan heli karin dib. Kuwa in ay leeyihiin ilkaha gaar udgoon ah oo ice cream la kulmi karaan wax la yaab leh. tii jalaato kala duwan Europe oo dhan bixiyaan qarax of dhadhan cajiib ah. Ka dib oo dhan, jalaatada waa habka ugu fiican in ay dib u fadhiisan hadh iyo nasasho maalin dheer ee sahaminta magaalo ka dib. Haddii aad la socdeen iyada oo Europe iyo waa lover jalaato ah, waxaan ka qaaday our waayo-aragnimo ballaaran in Safraan Europe iyo wada saaray liis aad loogu talagalay. Sidaa darteed, halkan waa qaar ka mid ah meelaha ugu fiican inay cunaan jalaato in Europe.
Halkee Si Cun Ice Cream In Italy?
Italy caan ku tahay jacaylka nolosha iyo cuntada delicious. cream ay baraf u muuqataa in la isu geeyo labada. Qaar badan oo jalaato kuwii ku caashaqi jiray isku raacsan yihiin in aadan ku noolaa ilaa aad dhadhamiseen qaadada ah gelato Talyaani dhab ah. dhadhan Taajirka iyo texture yihiin tilmaamayaasha cad in jalaato waxaa laga sameeyey by qofka in uu yahay dareen ku saabsan farsamo. Taasi waa haddii aad nasiib ku filan in ay soo gaarto meel jalaato wanaagsan yihiin.
Rome waxay hoy u tahay mid ka mid ah tii jalaato ugu fiican Yurub, Sida Milk. magaaladana waxaa ka buuxa ee jalaato ku caashaqay. Muuqaallo picturesque dadka ku riyaaqayaa gelato yihiin caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, magaalo la dukaamo gelato xad-dhaaf ah, mid u taagan sida a jawharad qarsoon that any gelato lover needs to visit. dalxiisayaal tiro iyo dadka deegaanka iyo ido soo Il Latte. Waa maxay samayn kartaa jalaato ay si gaar ah waxaad weydiin laga yaabaa in? marka hore, dad badan ku raaxaystaan ​​dhadhan hodanka ah iyo delicious ay bixiyaan. Waxay diyaariyaan gelato maalin kasta oo isticmaalaan waxyaabaha dabiiciga ah. kareemada ay baraf hodanka iyo shiidan, sida magacaba ka muuqata. Haddii aad ka yaabban wixii Kaalay hab Il Latte, waxaad ku farxi doonaan in ay ogaadaan waxa uu ku tarjumayaa in “Like Milk”. Xataa dadka caanaha neceb ku raaxaysan karaan caano lacag la'aan ah dhadhan ay. Dhadhan waa mid cajiib ah. Marka labaad, dadka Khayrja jawiga of dukaanka. Waxaa daro ah nuxurka iyo dareenka of Rome.
Halkee Si Cun Ice Cream In Germany?
jalaato Fantastic ma aha wax shurako badan oo ay Germany. Si kastaba ha ahaatee, Ballabeni Jalaato halkan waa in la beddelo in la qaado ay cajiib ah. Tani baraf qowladda jalaato u fiican oo ku yaalla Munich oo uu leeyahay xad ah ka dib. qowladda iska leh Giorgio Ballabeni, Grandmaster ah ee farshaxanka ee samaynta jalaato. Waxa uu bilaabay sidii hiwaayad in jalaato, iyo dhammaan Munich waa Mahdin, waayo,. dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka oo badan ayaa jecel dukaanka, waxaa ka tago dib u eegista cajiib ah. Marka aad isku daydo jalaato ay, Ma aha adag tahay in la arko sababta. Waxa ay saxar ay khiyaanada kaamil ah oo waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee ay duurka. Ay hamiday yimaado iyada oo loo marayo in qaadada kasta. oo faa'iido dheeraad ah waa in ay leeyihiin ay gaari jalaato iyo tiraan karaan si ay dhinac gaar ah!
Halkee Si Cun Ice Cream In Hungary?
Haddii aad waligaa heli karto naftaada in caasimadda ah ee Hungary, loo hubiyo in ay booqdaan Gelarto Rosa. Waxan cajiib ah jalaato waxa ku sugan wadnaha ee Budapest. oo dhan waxay ka mid yihiin oo ku saabsan dhaqan, Shukaansiga, hindiga, iyo hamiday, kaas oo la arki karo in ay shaqadooda. In si kale loo dhigo, ay yihiin khubarada dhabta ah oo duurka ku. Ilaa hadda sida ay ice cream, aad ku farxi doonaa inaan maqlo in ay isticmaalaan oo keliya maaddooyinka organic fiican. dukaan kasta oo ice cream weyn iska ilaalisaa in jalaatada aan dabiici ahayn. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay ka dhigeysaa Gelarto Rosa gaar ah waa hab farsamada si ay u qaabaynta jalaato galay Rose ah. Haddii aad weligiinba Szent Istvan Square inta lagu jiro maalinta kulul, Hubi in aad noqon doontaa in aad aragto dad badan oo la kacay kareemada baraf u qaabeysan marayay agagaarka.
soo socda waa in ay soo booqdaan qowladda jalaatada waa ka Zurich. up waa qowladda jalaato ah in ay heshay Waxyooday Xagga Argentina. Aasaasihii Rofe Bote halkaas ku noolaa mudo labo sano ku qaaday dhaqanka. Waxa uu soo jiitay oo ay Maalmihii, cabdo, iyo jalaatada dabiiciga ah. Waxa uu ahaa sidaas dhicin inuu iyaga ka soo bixiyey inay Switzerland. Maanta waxaa jira laba dukaamada in Zurich, oo waxay u furan tahay in ay xidido Argentinian. music The noole iyo dareenka Latin hubto in ay kor u jinni oo aad xitaa ka sii badan sida aad jeceshahay qaar ka mid ah jalaato delicious. Hasta waa boorish si fiican u dhadhan Argentina iyo xariif Swiss.
Faransiis The caan ku yihiin wax badan oo. marka hore, waxaa jira jacaylka ay farshaxanka, naqshadaha, iyo falsafada, taasoo la dafiri karin. Paris waa axdiga nool in a. Marka labaad, ay si fiican u yaqaan for ay karinta cajiib ah. jikooyinka Faransiis kuwa ugu aadka loo qiimeeyo ee dunida ay yihiin, oo waxaad noqon kartaa hubiyo in anshaxa jikada muujinaysaa ilaa lamadegaanka ay. Sababo la hamiday this cunto, waa la yaab ma leh in ay leeyihiin qaar ka mid ah kareemada baraf ugu fiican Yurub.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa Berthillon. Tani waa mid ka mid ah tii ugu caansan ee Paris iyo sabab fiican. Waxaa la furay 60 ah oo ay u adeegaya jalaato delicious tan. si xor ah u doortaan mid ka mid ah dhadhan ay delicious waxaad tahay, iyo xataa qasan kartaa oo u dhigma dhadhan in la helo isku kugu habboon.
Meel kasta oo aad doorato in ay u safraan, aad hubto in ay ku raaxaystaan ​​qaadada wanaagsan oo jalaato. Xasuuso inaad dib u fadhiiso oo raaxaysan muuqaal ah oo dhadhankeeduna wuxuu marka aad sidaa sameeyaan. waxa oo dhan ku qaad iyo caraf u dhadhan cajiib ah oo ice cream ee ka mid ah meelo kala duwan.
Ready in ay la kulmaan dhadhankii iyo dhadhan in Europe leeyahay in ay bixiyaan? Ballansan Your Tigidhada in Tareenku hadda. Ka dib markii in, you can experience the delicious world of ice cream in Europe.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Goobaha Best Si Cun Cream Ice In Europe” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-places-eat-ice-cream-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / de si / TR ama / iyo luuqado badan.